(src)="1.1"> World : One Day on Earth on 10.10.10 · Global Voices
(trg)="2.2"> ထိုနေ့တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ လူများသည် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကြမည်ဖြစ်ပြီး ၊
(src)="2.1"> People from all over the world have signed up to beapart of this experience , and many have created or joined one of the 495 groups and communities that have cropped up around the event : from parents to be , to weddings , to teachers , and groups aroundaspecific country or location .
(trg)="3.10"> ဤအဖြစ်အပျက်အတွက် ပါဝင်သူနည်းနေသေးသော နိုင်ငံအချို့လည်း ရှိနေသေးသည် ။
(trg)="3.11"> ထို့ကြောင့် စီစဉ်သူများက အတွေ့အကြုံ ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဤနိုင်ငံများတွင် နေထိုင်သူတစ်ယောက်ယောက်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရန် သို့မဟုတ် ထိုသူများကို ဖိတ်ခေါ်ပေးရန် နှိုးဆော်ထားသည် ။
(src)="2.2"> Although more than 10,000 people have already signed up , there are still some countries with low representation for the event , and the organizers have postedashout out for anyone to join or invite others who live in one of the countries to join in and beapart of the experience .
(trg)="4.1"> ထိုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရန် ယခုအထိ မှတ်ပုံတင်နိုင်သေးသည် ၊
(trg)="4.2"> ထို့ပြင် မိုးရှင်းဂရပ်ဖာ ဘလော့ဂ်မှ မတ်လမ်းဘာ့တ်က ရလဒ်များကို ကောင်းစွာ ပေါင်းပေးခဲ့သည် ။
(trg)="5.1"> ဒီ စီမံကိန်းရဲ့ ရလဒ်က အကုန်လုံးမျှဝေနိုင်တဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ ။
(src)="8.1"> There still is time to sign up and join the event , and Matt Lambert from Motionographer blog sums up the results nicely :
(trg)="5.2"> ပါထားတဲ့သူတွေက ဖန်တီးရေးနဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက် ငွေကြေးနဲ့ဆိုင်တာမပါဘဲ သုံးနိုင်မယ့် ဒေါင်းလုပ်ချခွင့်ရှိတဲ့ သတင်းကာတို ၊
(src)="8.2"> The results of this project will beashared archive of video downloadable — for non-commercial use by participants for creative and educational purposes —afeature film , andacommunity of filmmakers and inspired citizens dedicated to exploring our global identity viaashared media event .
(trg)="5.3"> ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ အသိုင်းအဝန်းနဲ့ ဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘုံဖြစ်ရပ်ရဲ့ အသိအအမှတ်ပြုတာကို လိုချင်တဲ့ နိုင်ငံသားတွေအတွက်လည်း အထူးရုပ်ရှင်ဆိုပြီး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ။
(src)="8.3"> However , according to this next clip , to be able to access this trove of knowledge you will need to uploada1 minute video during 10.10.10 .
(trg)="6.1"> သို့သော်လည်း ဤဗီဒီယိုနောက်တစ်ပိုင်းအရ ထိုဗဟုသုတပွဲရတနာ သိုက်ကြီအား ကြည့်နိုင်ရန် သင်သည် ၁ဝရက် ၊
(src)="8.4"> So don 't miss the chance !
(trg)="7.1"> ကမ္ဘာမြေရဲ့ ရက်တစ်ရက်ဆိုတာ ဘာလဲ
(src)="1.1"> Southeast Asia : Blogging about Football · Global Voices
(trg)="1.1"> အရှေ့တောင် ​ အာ ​ ရှ ၊
(src)="1.2"> Photo from Flickr page of Nhy Nguyen used under CC License Attribution-ShareAlike 2.0 GenericThere are many football blogs in Southeast Asia that provide relevant news stories and updates about football matches and programs in the region .
(trg)="2.1"> ဒေသ တွင်း ဘောလုံးပွဲများနှင့် အစီအစဉ်များ ၏ သတင်းများနှင့် သင့်တော်သော အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြပေးနေသော ဘောလုံးဘလော့ဂ်များစွာ အရှေ့တောင်အာရှဒေသအတွင်းတွင် ရှိနေပါသည် ။
(src)="1.3"> Through email , I interviewed Erick Bui of Vietnam Football and Chamroeun of Cambodia Football Roubroum about football blogging in Southeast Asia .
(trg)="2.3"> ဗီယက်နမ်ဘောလုံးမှ အဲရစ်ဘွေ့နှင့် ကမ္ဘောဒီးယား ဘောလုံး မှ ချွမ်ရွန်တို့အား အရှေ့တောင်အာရှ ၏ ဘောလုံးဘလော့ဂ်ရေးသားခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းခဲ့ပါသည် ။
(src)="2.1"> Erick givesabrief history of football in Vietnam
(trg)="3.1"> အဲရစ်ခ်က ဗီယက်နမ်ဘောလုံးသမိုင်းအကျဉ်းကို ရှင်းပြခဲ့သည် ။
(src)="3.1"> Football is unarguably the main and most supported sport in Vietnam .
(trg)="4.1"> ဘော လုံးက ဗီယက်နမ်မှာ အာပေးမှုအရဆုံးအားကစားဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါဘူး ။
(src)="3.2"> Its annual V-League competition has taken place since 1980 .
(trg)="4.2"> ဗီလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို ၁၉၈ဝကတည်းက နှစ်တိုင်းလုပ်ခဲ့တာလေ ။
(src)="4.1"> When Vietnam was split into North Vietnam and South Vietnam , two national teams existed ... After Vietnam was united in 1975 , Vietnamese football sufferedalong time of stagnation .
(trg)="5.1"> ဗီယက်နမ် ကို မြောက်ဗီယက်နမ်နဲ့ တောင်ဗီယက်နမ်ဆိုပြီးခွဲလိုက်တုန်းက နိုင်ငံအသင်းနှစ်သင်းဖြစ်သွားတယ် … ၁၉၇၅မှာ ပြန်ပေါင်းပြီးတဲ့ အခါကျတော့ ၊
(src)="4.2"> In 1991 , Vietnam national football team played its first international match .
(trg)="5.3"> ၁၉၉၁မှာတော့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအသင်းက ပထမဆုံး နိုင်ငံတကာပွဲကို ကစားခဲ့ပါတယ် ။
(src)="4.3"> Vietnamese football has madealot of improvement since then .
(trg)="6.1"> အဲ ဒီကတည်းက ဗီယက်နမ်းဘောလုံးက တိုးတက်လာခဲ့တာပါပဲ ။
(src)="4.4"> Both Vietnam national team and V-League are now one of the best in ASEAN region .
(trg)="8.1"> ဗီယက်နမ် ဘောလုံးအကြောင်းကိုရေးသော သူ ၏ အင်္ဂလိပ်ဘလော့ဂ်ကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ဖြစ်ရန် လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည့်အကြောင်းအရာကို အဲရစ်ကပြောပြသည် ။
(src)="4.5"> Erick names his motivation in maintaining an English blog about football in Vietnam
(trg)="9.1"> ဗီယက်နမ် လိုရေးတဲ့ ဘောလုံးဆိုက်တွေအများကြီး ရှိတာမှန်ပေမဲ့လည်း ၊
(src)="4.6"> Contrary to the big number of football sites in Vietnamese , there are few English sites about local football on the net .
(trg)="9.2"> ပြည်တွင်းဘောလုံးအကြောင်းရေးတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာမျက်နှာတွေကတော့ တော်တော်နည်းပါတယ် ။
(src)="4.7"> That 's the reason why I started Vietnam Football blog in order to help people know more about football in my country .
(trg)="9.3"> ဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ဘောလုံးအကြောင်းကို တခြားလူတွေ သိစေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဗီယက်နမ်ဘောလုံးဘလော့ဂ်ကို စတင်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းပါပဲ ။
(src)="4.8"> I havealot of friends overseas who are also football fans .
(trg)="9.4"> ကျွန်တော့်မှာ ဘောလုံးချစ်သူတွေဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသူငယ်ချင်း တော်တော်များများရှိပါတယ် ။
(src)="4.9"> They often question me about Vietnamese football because they find it quite hard to find the info .
(trg)="9.5"> သူတို့က ကျွန်တော့်ကို ဗီယက်နမ်ဘောလုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြဲမေးခွန်းထုတ်တယ် ၊
(src)="4.10"> Looking at this matter , I think an English football blog can be an essential link between Vietnam and the world .
(trg)="9.7"> ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ ဗီယက်နမ်နဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ဆက်သွယ်ပေးဖို့ အင်္ဂလိပ်လို ဘောလုံးစာမျက်နှာလိုတယ်လို့ ကျွန်တော် တွေးမိတယ် ။
(src)="4.11"> I have the passion and decent football knowledge so I really enjoy blogging about Vietnamese football
(trg)="9.8"> ကျွန်တော့်မှာ ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ လုံလောက်တဲ့ ဘောလုံးဗဟုသုတရှိတယ်ဆိုတော့ ဗီယက်နမ်ဘောလုံးအကြောင်း ဘလော့ဂ်ရေးရတာ တကယ်ပျော်ပါတယ် ။
(src)="4.12"> Chamroeun is the first Cambodian football blogger .
(trg)="11.1"> ချွမ်ရွန်သည် ကမ္ဘောဒီးယား ၏ ပထမဆုံး ဘောလုံးအကြောင်း ဘလော့ဂ်ရေးသူဖြစ်သည် ။
(src)="4.13"> Through his blog , Cambodia Football Roubroum , he shares information about football games in Cambodia
(trg)="11.2"> Cambodia Football Roubroum ဆိုသော သူ့ဘလော့ဂ်မှတစ်ဆင့် ကမ္ဘောဒီးယားရှိ ဘောလုံးပွဲများအကြောင်း မျှဝေလေ့ရှိသည် ။
(src)="5.1"> I launched my personal blog on July 2008 .
(trg)="12.2"> ဇူလိုင်မှာ ကျွန်တော်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘလော့ဂ်ကို စခဲ့တာ ။
(src)="5.2"> My main goal is to spread the news on Cambodian football .
(trg)="12.3"> ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကမ္ဘောဒီးယားဘောလုံးသတင်းတွေ ဖြန့်ဝေဖို့ပါပဲ ။
(src)="5.3"> I noticed that our two neighboring countries , Thailand and Vietnam , have better football programs .
(trg)="13.1"> ကျွန်တော် သတိပြုမိတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနဲ့ ဗီယက်နမ်မှာ ဘောလုံးအစီအစဉ်တွေက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာပဲ ။
(src)="5.4"> The players are well-paid .
(trg)="13.2"> ဘောလုံးသမားတွေကလည်း လစာကောင်းတယ် ။
(src)="5.5"> But in Cambodia , the footballers are not really in good condition .
(trg)="13.3"> ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားမှာတော့ ကစားသမားတွေက အဲလောက်ကြီး အခြေအနေမကောင်းကြဘူး ။
(src)="5.6"> Most of them play for free or with low salaries .
(trg)="13.4"> အများစုက အလကား ဒါမှမဟုတ် လစာနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲ ကစားနေကြတာ ။
(src)="5.7"> However , our football has changedalot in the last five years .
(trg)="13.5"> ဒါပေမဲ့ လွန်ခဲတဲ့ငါးနှစ်အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးအခြအနေက တော်တော်လေး ပြောင်းလဲခဲ့တယ် ။
(src)="5.8"> Now we haveaprofessional league which is sponsored byaVietnamese company .
(trg)="13.6"> ခုဆိုရင် ဗီယက်နမ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ထောက်ပံ့ကူညီတဲ့ ကြေးစားပြိုင်ပွဲတစ်ခုရှိနေပြီလေ ။
(src)="5.9"> Erick and Chamroeun are also linking to other football blogs in the region .
(trg)="15.1"> အဲ ရစ်နဲ့ ချွမ်ရွန်တို့က ဒေသတွင်းက တခြားဘောလုံးဘလော့ဂ်တွေနဲ့လည်း ဆက်သွယ်ထားကြပါတယ် ။
(src)="5.10"> They recommend these websites : Jakarta Casual for Indonesia and Singapore , Thai Port Football Club for Thailand , S-league : Facts & Figures for Singapore , Filipino Football for the Philippines , Soccer Myanmar , Foul from Malaysia and aseanfootball.org which gives regional sports updates .
(trg)="15.2"> သူတို့တွေ ညွှန်းတဲ့ ဒေသတွင်းအားကစားသတင်း စာမျက်နှာတွေကတော့ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ စင်္ကာပူအတွက်Jakarta Casual ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် Thai Port Football Club ၊
(trg)="15.3"> စင်္ကာပူအတွက် S-league : Facts & Figures ဖိလစ်ပိုင်အတွက် Filipino Football ၊
(src)="5.11"> These blogs also link to local football websites .
(trg)="17.2"> လောင်းကစားဆိုတာ လူများစုအတွက်ဖြစ်ဖြစ် လူနည်းစုအတွက်ဖြစ်ဖြစ် မကောင်းပါဘူး ။
(src)="6.1"> Haresh Deol , the blogger who maintains Foul from Malaysia , discusses sports betting which wasabig issue in Malaysiaafew months ago .
(trg)="17.3"> နိုင်ငံရေးသမားတွေကတော့ ဒီကိစ္စကို သူတို့တွေဘယ်လောက် တည်ကြည်ပြီး ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းလဲဆိုတာကို ကြွေးကြော်ဖို့ အကောင်းဆုံးခုတုံးအဖြစ် သုံးခဲ့ကြတယ် ။
(src)="7.1"> Talk about legalising sports betting is objected by many parties .
(trg)="17.4"> အစိုးရက ဒီအခြေအနေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်း ရှင်းပြသင့်တာ ။
(src)="7.2"> Gambling is not healthy for all majority or minority – .
(trg)="18.4"> ဒါပေမဲ့ ဒီဟာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရင်းဂစ်တွေ ( စာကြွင်း ။
(src)="7.3"> Politicians are using this issue asaperfect avenue to claim how righteous and religious they are .
(trg)="18.6"> မလေးရှားငွေကြေး ) ရဲ့စီးဆင်းမှုကို စောင့်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင် ၊
(src)="7.4"> The government should EXPLAIN the situation properly I ’ m not for gambling , as I ’ m not for smoking .
(trg)="18.7"> ပြီးတော့ အစိုးရအတွက် ဝင်ငွေရင်းမြင်တစ်ခုလည်း ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် မလုပ်နိုင်စရာ ဘာအကြောင်းရှိလဲ ။
(src)="7.5"> If it ’ s unhealthy , it 's unhealthy .
(trg)="20.1"> ဒေသ တွင်း ဘောလုံးပွဲများနှင့် အစီအစဉ်များ ၏ သတင်းများနှင့် သင့်တော်သော အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြပေးနေသော ဘောလုံးဘလော့ဂ်များစွာ အရှေ့တောင်အာရှဒေသအတွင်းတွင် ရှိနေပါသည် ။
(src)="7.6"> But if it 'sagood method to monitor the outflow of our Ringgit ( author s note ’ : Malaysian currency ) andasource of income for the government , why not ?
(trg)="20.3"> ဗီယက်နမ်ဘောလုံးမှ အဲရစ်ဘွေ့နှင့် ကမ္ဘောဒီးယား ဘောလုံး မှ ချွမ်ရွန်တို့အား အရှေ့တောင်အာရှ ၏ ဘောလုံးဘလော့ဂ်ရေးသားခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းခဲ့ပါသည် ။
(src)="1.1"> South Asia : Bloggers Discussing Water Issues · Global Voices
(trg)="1.2"> ရေ ​ ကိစ္စ ​ နှင့် ပတ်သက် ​ ၍ ဘ ​ လော့ဂ် ​ ရေး ​ သူ ​ များ ဆွေးနွေး ​ ချက်
(src)="1.2"> Blog Action Day is an annual event held every October 15 that unites the world 's bloggers in posting about the same issue on the same day .
(trg)="2.1"> ဘလော့ဂ်လှုပ်ရှားမှုနေ့ သည် အောက်တိုဘာ ​ လ ၁ ​ ၅ ​ ရက် ​ ၌ အကြောင်းအရာ ​ တစ် ​ ခု ​ တည်း ​ နှင့် ပတ်သက် ​ သည် ​ ကို တစ် ​ နေ့ ​ တည်း ​ တွင် ရေးသား ​ လွှင့် ​ တင် ​ ကြ ​ သော ကမ္ဘာ ​ ဘ ​ လော့ဂ် ​ ရေး ​ သူ ​ များ ​ စုစည်း ​ ပြီး နှစ်စဉ် ​ ကျင်းပ ​ သော အစီ ​ အစဉ် ​ တစ် ​ ခု ​ ဖြစ် ​ သည် ။
(src)="1.3"> This year the action theme is ‘ water ' .
(trg)="2.2"> ယခု ​ နှစ် လှုပ်ရှား ​ ရန် အကြောင်းအရာ ​ မှာ “ ရေ ” ဖြစ် ​ သည် ။
(src)="1.4"> A number of South Asian bloggers have also participated in this event .
(trg)="2.4"> မည် ​ သည့် ​ အကြောင်းအရာ ​ များ ​ အား ဆွေးနွေး ​ ပြောဆို ​ ခဲ့ ​ သည် ​ ကို ကြည့် ⁠ ကြည့် ​ ကြ ​ ပါ ​ စို့ ။
(src)="1.5"> Let us look at what some of them are discussing about .
(trg)="3.1"> အိန္ဒိယ ၊
(src)="2.1"> Water pots lined up for filling in Mamallapuram , India .
(trg)="3.2"> မာ ​ မယ် ​ လ ​ ပူ ​ ရမ် ​ တွင် ရေ ​ ဖြည့် ​ ရန် အိုး ​ များ တန်း ​ စီ ​ ထား ​ သည် ​ ကို တွေ့ ​ ရ ​ စဉ် ။
(src)="2.2"> Image by Flickr user mckaysavage .
(trg)="3.3"> ဖ ​ လစ် ​ ကာ ​ အသုံးပြု ​ သူ mckaysavage ၏ ဓာတ် ​ ပုံ ။
(src)="2.3"> CC BY
(trg)="16.3"> CC BY
(src)="3.1"> Water in India isaparadox .
(trg)="5.3"> မြောက် ​ အိန္ဒိယ ​ က ရေ ​ ကို မွေး ​ ထုတ်ပေး ​ သည် ။
(src)="3.2"> It has always been the boon and the bane for the length and breadth of the nation .
(trg)="5.4"> တောင် ​ အိန္ဒိယ ​ က စီး ​ ဆင်း ​ လာ ​ သော မြစ် ​ များ ​ အတွက် တိုက်ခိုက် ​ သည် ။
(src)="3.3"> North India gives birth to water .
(trg)="5.5"> အနောက်မြောက် ​ အိန္ဒိယ ​ မှာ ​ မူ ရေ ​ ပြတ်လပ် ​ နေ ​ သော သဲ ​ ကန္တာ ​ ရ ​ ဖြစ် ​ နေ ​ သည် ။
(src)="3.4"> South India fights for the rivers that flow .
(trg)="6.5"> သယ်ယူ ​ ရ ​ ခက် ​ ခြင်း ၊
(src)="3.5"> Northwest India isawater-starved desert .
(trg)="6.7"> သေ ​ ဆုံး ​ မှု ​ နှင့် ရောဂါ ​ များ ၊
(src)="3.6"> And Eastern India has the highest rainfall that helps none .
(trg)="6.8"> ညစ်ညမ်း ​ ခြင်း ၊
(src)="4.1"> And to top it , the water woes in India include contamination , inadequacy , denial , corruption , portability problems , access , deaths & diseases , pollution , irresponsible industrial growth dependent on water , andawhole lot more .
(trg)="6.9"> ရေ ​ ကို ​ မှီခို ​ နေ ​ သော တာဝန် ​ မ ​ ကျေ ​ သော စက် ​ မှု ​ လုပ် ​ ငန်း ​ များ နှင့် အခြား ​ အကြောင်း ​ ချက် ​ များ ​ စွာ ပါဝင် ​ နေ ​ သည် ။
(src)="4.2"> We have forgotten our ingenious ways of life where every natural resource such as water , was used and not abused .
(trg)="7.1"> ကျွန်တော် တို့ ​ သည် ရေ ​ အစ ​ ရှိ ​ သော သ ​ ဘာ ​ ဝ ​ ရင်း ​ မြစ် ​ များ ​ ကို အလွဲ ​ မ ​ သုံး ​ ဘဲ ကောင်း ​ စွာ ​ အသုံးပြု ​ သော အစီ ​ အစဉ် ​ တ ​ ကျ ​ ဘဝ ​ ကို မေ့ ​ နေ ​ ခဲ့ ​ ရ ​ ပြီ ။
(src)="4.3"> There were no endless showers , hot tubs , rain parties , or huge water tanks to ensure that the water kept running during all ablutions .
(trg)="7.5"> သို့မဟုတ် လျှော် ​ ဖွပ် ​ နေ ​ ချိန်း ​ အတွင်း ရေ ​ လာ ​ နေ ​ သည် ​ ကို သိ ​ နိုင် ​ ရန် ​ ဖွင့် ​ ထား ​ သော ရေကန် ​ ကြီး ​ များ မ ​ ရှိ ​ ခဲ့ ​ ပါ ။
(src)="4.4"> Water was rationed as per use .
(trg)="7.6"> ရေ ​ ကို သုံးစွဲ ​ မှု ​ အလိုက် အချိုး ​ ချခဲ့ ​ ကြ ​ သည် ။
(src)="4.5"> There was no concepts of 24 /7water supply where every household had to dig into their bit of land .
(trg)="7.7"> အိမ် ​ တိုင်း ​ က ရေရ ​ ရှိ ​ ရန် တွင်းတူး ​ ခဲ့ ​ ရ ​ ချိန် ​ တွင် ၂ ​ ၄ ​ နာရီ ၇ ​ ရက် ရေ ​ ပေး ​ ရ ​ မည် ​ ဆို ​ သော အယူ ​ အဆ ​ များ ​ လည်း မ ​ ရှိ ​ ခဲ့ ​ ပါ ။
(src)="4.6"> We , with knowledge , cognizance and responsibility , are continually turning earth into living hell .
(trg)="9.1"> ဒေလီစိမ်းလန်းရေးမှ အာစ် ​ သ ကူ ​ က ​ ရီ ​ တီ ​ က ရေ ​ ကို ​ ထိန်းသိမ်း ​ သုံးစွဲ ​ ရန် နည်း ​ လမ်း ​ ၂ ​ ၅ ​ သွယ် ​ ကို ပေးခဲ့ပါသည် ။
(src)="4.7"> Aastha Kukreti at Delhi Greens provides 25 tips to save water .
(trg)="9.2"> အဘ္ဟ မိ ​ ဒ ​ က သတင်းပေးရေးသားခဲ့သည် ​ မှာ
(src)="4.9"> In India , in the area of sanitation the Sulabh Movement has brought aboutasocial revolution .
(trg)="9.3"> အိန္ဒိယတွင် ဆူလဘ် လှုပ်ရှား ​ မှု သည် လူ ​ မှု ​ လုပ် ​ ငန်း တော် ​ လှန် ​ ရေး ​ ကို ယူဆောင် ​ လာ ​ ပေး ​ သည် ။
(src)="4.11"> Water distribution point in Patan Nepal .
(trg)="9.5"> နီ ​ ပေါ ​ နိုင်ငံ ​ ရှိ ရေ ​ ဖြန့် ​ ဝေ ​ ရာ ​ ဌာန ။
(src)="4.12"> Image by Flickr user Wayan Vota .
(trg)="9.6"> Flickr အသုံးပြု ​ သူ Wayana Vota ၏ ဓာတ် ​ ပုံ ။
(src)="4.13"> CC BY-NC
(trg)="9.7"> CC BY-NC နီပေါ ၊
(src)="4.14"> Nepal :
(src)="4.15"> Bhumika Ghimire shedsalight into the water issues in Nepal :
(trg)="10.1"> ဘုမိက ဂီ ​ မိုင်း ​ ယား ​ က နီ ​ ပေါ ​ နိုင်ငံ ​ ၏ ရေ ​ အကြောင်း ​ ကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်မှာ ၊
(src)="4.16"> Water crisis is directly related to Nepal 's deteriorating environment .
(trg)="11.1"> ရေ အကျပ်အတည်း ​ သည် နီ ​ ပေါ ​ ၏ ပတ်ဝန်းကျင် ​ ညစ်ညမ်း ​ မှု ​ နှင့် တိုက်ရိုက် ​ သက်ဆိုင် ​ နေ ​ ပါ ​ သည် ။
(src)="4.17"> In capital Kathmandu , many areas don 't get water for six daysaweek , and are forced to either buy water through dealers or have to rely on local wells and rivers-whose water quality is not monitored .
(trg)="11.2"> ခတ္တ ​ မန္ဒု ​ မြို့တော် ​ တွင် တစ် ​ ပတ် ​ လျှင် ခြောက် ​ ရက် ရေ ​ မ ​ ရ ​ ရှိ ​ သော ​ နေရာ ​ များ ​ စွာ ရှိ ​ ပြီး တစ် ​ ဆင့် ​ ခံ ​ ဝယ် ​ လက် ​ များ ​ ထံ ​ မှ ဝယ် ​ ယူ ​ ရန် ​ ဖြစ် ​ စေ ၊
(src)="4.18"> Ujjwal Acharya postsapicture showing how water is associated with our day to day lives .
(trg)="13.1"> အုဂ်ျဝယ် အချာ ​ ယ ​ က ကျွန်ုပ် ​ တို့ ​ ၏ ​ နေ့စဉ် ​ ဘ၀ ​ နှင့် ရေ ​ ဆက် ​ စပ် ​ နေ ​ ပုံ ​ ကို ဖော် ​ ပြ ​ သော ပုံတစ်ပုံကို တင် ​ ခဲ့ ​ သည် ။
(src)="4.19"> Pakistan :
(trg)="13.2"> ပါ ​ ကစ္စ ​ တန် ၊
(src)="4.20"> Although Pakistan is suffering from the worst flood in past century , some of its region are dry and suffer from desertification .
(trg)="14.1"> ပြီး ခဲ့ ​ သော ​ ရာ ​ စု ​ နှစ် ​ များ ​ တွင် ပါ ​ ကစ္စ ​ တန် ​ သည် အဆိုး ​ ဆုံး ​ ရေ ​ ကြီး ​ မှု ​ နှင့် ကြုံတွေ့ ​ ခဲ့ ​ ရသော် ​ လည်း ယင်း ​ ဒေသ ​ အချို့ ​ သည် ခြောက်သွေ့ ​ ကာ သဲ ​ ကန္တာ ​ ရ ​ ပုံ ​ ပြောင်း ​ ခြင်း ​ နှင့် ရင်ဆိုင် ​ နေ ​ ရ ​ သည် ။
(src)="4.21"> Khalida Brohi , an indigenous girl from Balochistan , Pakistan notes that indigenous people are the first ones to be worst hit by climate change :
(trg)="15.1"> ဘယ် လို ​ ချိ ​ စ ​ တန် ​ ၏ ရိုးရာ ​ နေထိုင် ​ မှု ​ ပုံစံ ​ နှင့် စိုက်ပျိုး ​ မြေ ​ များ ​ ကို အသုံးပြု ​ ပုံ ​ တို့ ​ သည် တ ​ ဖြည်း ⁠ ဖြည်း ​ နှင့် ပြောင်းလဲ ​ လာ ​ နေ ​ ခဲ့ ​ သည် ။
(src)="4.22"> Balochistans traditional forms of livelihood and using of agricultural land have now slowly been changing , The two methods Khushkaba and Sailaba of agriculture are diverted , the usually making of bands to use up flood water for lands doesn ’ t work because floods have change course as now even the ingenious knowledge can t predict ’ from where the flesh floods would be attacking , onceablessing to the people of valleys in Baluchistan , mountains are nowadanger of disaster them .
(trg)="15.4"> အဘယ် ​ ကြောင့် ​ ဆိုသော် ရေ ​ လွှမ်းမိုး ​ မှု ​ သည် လား ​ ရာ ​ ပြောင်း ​ သွား ​ ခဲ့ ​ ပြီး ယခု ​ အခါ ပညာ ​ ရှင် ​ များ ​ ပင် ​ လျှင် မည် ​ သည့် ​ ဒေသ ​ သည် ရေ ​ လွှမ်းမိုး ​ ခံ ​ ရ ​ မည် ​ ကို ခန့် ​ မှန်း ​ နိုင် ​ ခြင်း မ ​ ရှိ ​ တော့ ​ ဘဲ ဘာ ​ လု ​ ချိ ​ စ ​ တန် ​ တောင် ​ ကြား ​ ရှိ ​ လူ ​ များ ​ အတွက် ကောင်း ​ ချီး ​ ဖြစ် ​ ခဲ့ ​ ဖူး ​ သော တောင်တန်း ​ များ ​ သည် ယခု ​ အခါ သဘာ၀ ​ ဘေး ​ အန္တရာယ် ​ ၏ အန္တရာယ် ​ ဖြစ် ​ နေ ​ တော့ ​ သည် ။
(src)="4.23"> Marvi well in Malir village in Tharparkar desert of Sindh .
(trg)="16.1"> ဆင်းဒ် ​ ရှိ သာ ​ ပါ ​ ကာ သဲ ​ ကန္တာ ​ ရ မာ ​ လီ ​ ယာ ​ ရွာ ​ ၏ ရေတွင်း ။
(src)="4.24"> Image by Flickr user Kashif .
(trg)="16.2"> Flickr အသုံးပြု ​ သူ Kashif ၏ ဓာတ် ​ ပုံ ။
(src)="4.25"> CC BY
(src)="5.2"> When it rains , the rain water gets collected in small low lying bowl shaped ponds called the tobas where “ ” men and animals drink together .
(trg)="18.1"> မိုးရွာ ပြီ ​ ဆို ​ လျှင် “ တို ​ ဘ ” ဟုခေါ် ​ သော လူ ​ နှင့် ​ တိရစ္ဆာန် ​ များ ရေ ​ အတူတူ ​ သောက် ​ ကြ ​ သည့် ပန်းကန်လုံး ​ ပုံ ​ သဏ္ဌာန် ရေတွင်း ​ ငယ် ​ များ ​ ထဲ ​ သို့ စီး ​ ဝင် ​ သည် ။
(src)="5.3"> There are no alternatives as well digging is not possible .
(trg)="18.2"> ရေတွင်း ​ တူး ​ ရန် မ ​ ဖြစ် ​ နိုင် ​ ၍ အခြား ​ နည်း ​ လမ်း ​ လည်း မ ​ ရှိ ​ ပေ ။
(src)="5.4"> Even if there isasuccess , the water is so brackish and salty that it cannot be consumed for drinking purposes .
(trg)="18.3"> တူး ​ ၍ ​ ရ ​ သည် ​ ဆို ​ လျှင် ​ ပင် ရေ ​ သည် အလွန် ​ ငန် ​ သော ဆား ​ ငန် ​ ရေ ​ သာ ဖြစ် ​ ၍ မ ​ သောက် ​ သုံး ​ နိုင် ​ ပေ ။
(src)="1.1"> Where is the flag of the Republic of China ? · Global Voices
(trg)="1.1"> ထိုင် ​ ဝမ် ​ နိုင်ငံ ​ ရဲ့ အလံ ​ ဘယ် ​ မှာ ​ လဲ
(src)="1.2"> A number of activists from Hong Kong , Taiwan and Macau landed the Diaoyu island on August 15 .
(trg)="1.3"> ထိုင်ဝမ်နှင့် မကာအိုက တက်ကြွလှု့ပ်ရှားသူတွေက ဩဂုတ်၁၅ရက်နေ့က သောက်ရွီးကျွန်းကို ရောက်ရှိလာပါတယ် ။
(src)="1.3"> While mainland Chinese media gave large coverage to the news as it reasserted China 's territorial claim over the disputed island , the flag of the Republic of China ( Taiwan ) was missing in many of the media outlet .
(trg)="1.4"> တရုတ်ပြည်မကြီးက မီဒီယာတွေက အငြင်းပွားဖွယ်ကျွန်းကို တရုတ်ရဲ့မြေပိုင်နက်အဖြစ် သတ်မှတ်တာကို ရေးသားတင်ပြနေကြပြီး ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံရဲ့အလံက သတင်းဌာနတော်တော်များ ⁠ များမှာ ပျောက်ကွယ်နေပါတယ် ။
(src)="1.4"> China Media Project highlighted the news .
(trg)="1.5"> တရုတ်မီဒီယာစီမံကိန်းက အဲဒီသတင်းကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပါတယ် ။
(src)="1.1"> Malaysia : Government Vows to Review Web Censorship Law After Protest · Global Voices
(trg)="1.2"> ဆန္ဒ ​ ပြ ​ ပြီး ​ နောက် ​ တွင် ဝက် ( ဘ် ) ဆင် ​ ဆာ ​ ဥပဒေ ​ ကို သုံးသပ် ​ ရန် မလေးရှား ​ အစိုးရ ကတိ ​ ပြု
(src)="1.2"> Update 18 / 8 / 2012 : The Cabinet has upheld the amendments made to Section 114A of the Evidence Act .
(trg)="1.6"> သက်သေခံဥပဒေ ၏ ပုဒ်မ၁ ⁠ ၁၄ ( က ) ကို ပြင်ဆင်ခြင်းအား အစိုးရအဖွဲ့က ခုခံပြောဆိုလိုက်သည် ။
(src)="2.1"> On the August 14 2012 , thousands of Malaysians participated in an online protest against the recently introduced Section 114A , an amendment in the law that is deemed by many asathreat to internet freedom .
(trg)="2.3"> ထောင်ပေါင်းများစွာသော မလေးရှားလူမျိုးတို့က မကြာခင်က မိတ်ဆက်လိုက်သော ပုဒ်မ၁ ⁠ ၁၄ ( က ) ကို အွန်လိုင်းဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခြင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည် ။
(src)="3.1"> A blog specially created for this cause , posted details about how this law would affect Malaysians :
(trg)="2.4"> ယင်းဥပဒေပြင်ဆင်မှုကို အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်ကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်းဟု အများစုက ဝေဖန်ပြစ်တင်ကြသည် ။
(src)="4.1"> Titled Presumption “ of Fact in Publication ” , Section 114A holds the following people accountable for publishing content online :
(trg)="3.1"> ထိုအတွက် အထူးဖန်တီးလိုက်သော ဘလော့ ( ဂ် ) တစ်ခုက မလေးရှားလူမျိုးအပေါ် ထိုဥပဒေသက်ရောက်နိုင်မှု အသေးစိတ်ကို ဖော်ပြထားသည် ၊
(src)="5.1"> ( 1 ) those who own , administrate , or edit websites open to public contributors , such as online forums or blogs ;
(trg)="5.1"> ( ၁ ) အွန်လိုင်း စကားဝိုင်းများ သို့မဟုတ် ဘလော့ ( ဂ် ) များကဲ့သို့ အများပြည်သူပါဝင်မှုအတွက် ဖွင့်ပေးထားသော ဝက် ( ဘ် ) စာမျက်နှာများကို ပိုင်ဆိုင် ၊
(src)="6.1"> (2) those who provide webhosting services or Internet access ; and
(trg)="7.1"> ( ၃ ) အွန်လိုင်းအချက်အလက်များကို ဖြန့်ဝေရန် ကွန်ပြူတာ သို့မဟုတ် ရွေ့လျားစက်ပစ္စည်းများကို ပိုင်ဆိုင်သူများ
(src)="7.1"> (3) those own the computer or mobile device used to publish content online .
(trg)="8.1"> တစ်နည်းဆိုလျှင် အသရေဖျက်မှုဟု ယူဆနိုင်သော အချက်အလက်များမှတစ်ဆင့် သင် ၏ အသုံးပြုသူအမည် ၊
(src)="8.1"> In other words , if allegedly defamatory content is traced back to your username , electronic device , and / or WiFi network , Section 114A presumes you are guilty of publishing illicit content on the Internet .
(trg)="8.2"> လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ဝိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်များကို ထောက်လှမ်းနိုင်လျှင် ပုဒ်မ ၁ ⁠ ၁၄ ( က ) ဖြင့် သင့်ကို အင်တာနက်တွင် တရားမဝင် အချက်အလက်များတင်မှုနှင့် စွဲဆိုနိုင်သည် ။
(src)="9.1"> But what if you were the victim of identity theft andahacker wrongfully used your Twitter or Facebook account to post defamatory content ?
(trg)="9.1"> သို့ရာတွင် သင်က တရားခံအဖြစ်စွပ်စွဲခံရပြီး ဟက်ကာတစ်ဦးက သင် ၏ တွစ်တာ သို့မဟုတ် ဖေ့ ( စ် ) ဘွတ် ( ခ် ) ကို အသုံးပြုကာ အသရေဖျက်သော အချက်အလက်များကို တင်သွားသည် ဆိုလျှင် မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း ။
(src)="9.2"> Under Section 114A , you are still considered guilty until proven innocent .
(trg)="9.3"> သင်သည် အပြစ်မရှိဟု သက်သေမပြနိုင်မချင်း တရားခံအဖြစ်သတ်မှတ်သည် ။
(src)="10.1"> The campaign seeks to have influential bloggers and news sites insertapop-up in their respective websites on August 14 to inform their readers about 114A , so that awareness of this would be spread to as many Malaysians as possible to protest the enactment of this law .
(trg)="10.1"> ထိုလှုပ်ရှားမှုက ပုဒ်မ ၁ ⁠ ၁၄ ( က ) အကြောင်းကို ၄င်းတို့ ၏ စာဖတ်သူများထံ အသိပေးနိုင်ရန် ဩဇာရှိဘလော့ ( ဂ် ) ရေးသူများနှင့် သတင်းစာမျက်နှာများကို သက်ဆိုင်ရာ ဝက် ( ဘ် ) ဆိုက်များတွင် ထည့်သွင်းရန် တောင်းဆိုခဲ့သည် ။